Waa Shan Su’aalood Oo Muhiim ah ee Xalay xildhibaan Goodax barre la waydiiyay? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waa Shan Su’aalood Oo Muhiim ah ee Xalay xildhibaan Goodax barre la...
Waa Shan Su’aalood Oo Muhiim ah ee Xalay xildhibaan Goodax barre la waydiiyay?
1- Wasiir Goodax maka qoomameyn in Ardadii Puntland aad u diiday Shahaadadii Dugsiga sare.
-Goodax Barre: Maya kama qoomameynayo waliba hadii markale wasaarada waxbarashada wasiir layga dhigo Sidii oo kale Ayaan sameyn lahaa
2-Wasiir Goodax, ma waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta aaminsan in Madaxweynaha HirShabeelle uu noqdo qof reer Hiiraan ah oo kaliya?
-Wasiir Goodax: Haa waan aaminsanahay, waana waxa hadda ay dhibaatadu ka taagan tahay, maxaa yeelay, shalay Madaxweyne Xasan Sheekh oo digreeto kusoo saaray in caasimadda maamulkaas ay noqoto Buulo Burte ayaa Jowhar laga dhigay, maanta in caasimaddii iyo madaxweynihii hal gobol isku qaataan, ma noqon karto wax wadaag lagu wada yahay
3-Wasiir Goodax Marka Xilka lagaa qaaday maxaad xukuumada u dhaliishay oo markii Hore aad la aamusnayd?
Goodax barre: Aniga Waligeey YesMan ma noqon, intaan xukuumada Ku jiray waxaan ahaa qof warkiisa la maqlo wixii qaldanna Talo ka dhiibtay kana dagaalama, waxaa dhacday in mar Aan Warqad ruqsa ah geeyay xafiiska, dadka ma oga dagaalka aan Ku jiray Xiligaas balse hada system-ka qayb kama ahi waxii qaldan keliya banaanka Ayaan ka sheegi kara, siyaasad ma’aha xukuumad aad ka tirsan tahay adoo wax sixi kara in aad mucaarado.
4-Xildhibaane ma taagersan tahay midowga musharaxiinta ee mucaaradka ah?
Goodax barre: Hal wax baan Ku taagersanahay waana in dalka ay ka dhacdo doorasho Xalaal Ah heshiisna lagu wada yahay.
5- Xildhibaan Goodax dadka Reer Hiiraan ma waxaa U fiican Hirshabelle mase Hiiraan state:
-Goodax Barre: Hiiraan maamulka Hirshabelle shalayna qayb kama ahayn hadana qayb kama aha, Hadii waxyaabaha qaldan la saxayo waxaa sahlan kasii mid ahaanshaha Hirshabelle, Hadiise aan la saxayn Hiiraan gooni isu taag ayaa u Wanaagsan.
Su’aasheed isleedahay jawaab Ku haboon ayuu ka bixiyay?
Previous articleDhimaatada gawaarida xamuulka ay ku hayaan Muqdisho
Next articleMareykanka” Madaxda dowlad Goboleedyada kama bixi karaan Muqdisho
Wasiirka Gaashaandhigga ““Geesiyaasha naftood hurayaasha ah ee qaranka waxay saakay...
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda xilgaasriinta Xasan Xuseen Xaaji ayaa boogaadiyay guulaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ay ka gaaree n howlgal ay ka fuliyeen deegaanno ka...
Madaxwaynihii deegaanka Tigreega Dr. Debretsion Gebremichael oo markii ugu horeysay ka...
Ku dhawaad 20 qof oo lagu dilay ka dib markii...
Xasuustii maanta oo kale iyo Xasuuqii Etoobiya ka geesteen Muqdisho
Qaraxyo waawayn oo ka dhacay xarunta ganacsiga ee Equatorial Guinea,ee Bata